Nepali Rajneeti | दुई चार दिन कस्सीएका प्रेम आले किन भए यसरी युर्टन ?
दुई चार दिन कस्सीएका प्रेम आले किन भए यसरी युर्टन ?
माघ १, २०७८ शनिबार ५४ पटक हेरिएको
नारायणहिटी दरबार संग्राहलय भित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न खोजे पछि विवादमा आएको बतास अर्जनाजेसनको विकृत धन्दा वाइडबडी काण्ड जस्तै सामसुम हुने देखिएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अरबौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै ठूलै हल्लाखल्ला मच्चाइयो अन्तीममा केही कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाएर ठूला माछा लुकाइयो । नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट प्रकरणमा पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।
मिडिया मार्फत समाचार संप्रेषण हुन थाले पछि विभागिय मन्त्री प्रेम आलेले मौखिक निर्देशन दिँदै काम मात्रै रोकाएनन् बनिरहेको संरचना नै भत्काइदिए । यस सन्दर्भमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन उनले समितीनै गठन गरे । गठित समितीले प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा टाइपको ।
त्यस्तै क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया भाडामा लगाउँदा अस्वाभाविक रूपमा दररेट निर्धारण गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाता आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन कबोल गरी ठेक्कासम्झौता गरेको देखिँदा सो कार्यमा आपसी मिलोमतो भएको हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो खबर OTV NEP[AL मा छ ।